Kiiskii ugu horreeyay ee cudurka Zika oo laga soo tabiyay Malaysia – The Voice of Northeastern Kenya
Kiiskii ugu horreeyay ee cudurka Zika oo laga soo tabiyay Malaysia
Waddanka Malaysia ee ku yaalla koonfurta bari ee qaaradda Asia ayaa laga soo tabiyay kiiskii ugu horreeyay ee ah cudurka Zika oo ay dhaliso isla markaana gudbiso kaneecada.
Cudurkaan oo saameyn ku yeesha maskaxda carruurta uurka hooyada ku jira ayaa waxa uu saameyn ballaaran ku yeeshay dadal ku yaalla qaaradda Latin America.
Sida ay shaaciyeen masuuliyiinta Malaysia, Viruska ama cudur sidaha ayaa laga helay qof dumar ah oo dhawaan booqatay dalka ay Malaysia dariska yihiin ee Singapore, halkaasoo ay ku suganyihiin 115 ruux oo cudurkaasi qabta.
War saxaafadeed maanta oo Khamiis ah kasoo baxay waaxda caafimaadka ee dalka Malaysia ayaa lagu sheegay in haweeneyda bukaanka ah oo ay da’deeda tahay 58 sano jir uu xanuunkaan soo ritay 1 isbuuc kadib markii ay dib uga soo laabatay dalka Singapoe.
Shaqaalaha caafimaadka ee dlakaasi ayaa hadda billaabay tijaabooyin dheeraad ah oo ay ku doonayaan in ay ku ogaadaan haddii ay jiraan dad kale oo cudurkaasi uu saameeyay.
Waaxda koontaroolka cudurrada ee dalka Mareykanka oo si weyn ula socotay dhaqdhaqaaqa Zika ayaa dhawaan sheegtay in dalka Singapore uu yahay waddanka kaliya eek u yaalla qaaradda Asia oo uu gaaray cudurkaasi.
Hase ahaatee Malaysia ayaa noqoneysa dalkii 2-aad ee uu ka dillaaco cudurkaasi halista ba’an leh.
← Chase Bank oo billaabay dhaqan galinta xeerka dhimaya faa’iidada deymaha
Suuqyada waaweyn ee xaafadda Islii oo maalintii 2-aad xiran →
1 thought on “Kiiskii ugu horreeyay ee cudurka Zika oo laga soo tabiyay Malaysia”
all that, so now me also commenting at this place. http://bing.net